Kubhekwe lukhulu koweChiefs neSundowns - Bayede News
Iqiniso lithi eminyakeni edlule uwodwa umdlalo eNingizimu Afrika obekuthiwa ungomkhulu, lowo owe-Orlando Pirates neKaizer Chiefs.
Okwenza lokho ukuthi lo mdlalo odume ngokuthi iSoweto Derby, awugcini ukuba ubukwe kuleli kodwa ubukwa nakwamanye amazwe ase-Afrika naphesheya kwezilwandle. Phezu kwalokho indlela okhangiswa ngayo ngaphambi kokuba zidudulane ensimini ikhombisa ubukhulu bawo.
Kodwa konke lokhu kushintshile njengoba neMamelodi Sundowns isikhuphuke ngengalo yaze yagamanxa ekutheni ithole amandla okuthi ibalwe njengeqembu elikhulu kuleli. Leli qembu eliqeqeshwa uPitso “Jingles” Mosimane likwenze lokhu ngokuthi linqobe izicoco, okubalwa iligi ye-Absa Premiership neCAF Champions League imbala.
Kuyimanje iSundowns iyona evikela isicoco se-Absa Premiership, ingompetha beTelkom Knockout besizini yangowezi-2019/2020. IChiefs nePirates sekuphele amasizini amathathu benganqobi neyodwa indebe ngaphansi kwePremier Soccer League (PSL).
Phezu kokuthi iSundowns idlale imidlalo eminingi, kodwa isakwazi ukuba izifake embangweni weligi njengoba ihlezi endaweni yesibili kulogi.
IChiefs muva nje ihlezi esicongweni kulogi ngamaphuzu angama-53 emva kwemidlalo engama-26, iSundowns yona ilandela emumva ngamaphuzu angama-50 emidlalweni elinganayo. Njengoba la mamqembu ezotholana phezulu namuhla ntambama emdlalweni we-Absa Premiership kusho ukuthi kulo mdlalo kuzoguga utshani elwela ukuba athole amaphuzu amathathu.
Ukunqoba kweSundowns emdlalweni wayo neLamontville Golden Arrows ngegoli elilodwa eqandeni elivalelwe phakathi uThemba “Mshishi” Zwane, kubeke leli qembu lasePitoli embangweni kwazise besekuthiwa liphumile njengoba selokhu kubuye imidlalo emva kokumiswa kwayo ngenxa yokhuvethe lingakaze linqobe nowodwa.
Ukungenzi kwahle kweChiefs ehlulwe iBloemfontein Celtic yadlala ngokulingana neHighlands Park kuweze iSundowns yaba sembangweni weligi.
Noma imuphi umphumela womdlalo wanamuhla uzobe usho okuthize kuDowns neChiefs. Ukunqoba kweSundowns kuzobe kusho ukuthi la maqembu aseyalingana ngamaphuzu umehluko ngamagoli, uma ihlulwa kuzobe kusho ukuthi iChiefs isalelwe amaphuzu amathathu emidlalweni emithathu ukuthi ibengompetha bakule sizini.
Uma umdlalo uphela ngokulingana kobe kusho ukuthi kusangenzeka noma yini njengoba kuzobe kusasele imidlalo emithathu.
Lo mdlalo wala maqembu ozobanjelwa eFNB Stadium ngehora lesi-6 kusihlwa, yize uzobe ungena balandeli kodwa kulindeleke ukuthi ushube kakhulu, ngenxa yobuhlakani babadlali kanye nabaqeqeshi. Emdlalweni wokuqala la maqembu etholene phezulu kwanqoba iChiefs ngamagoli amabili eqandeni, amagoli ashaywa uSamir Nurkovic ongekho kulo mdlalo ngenxa yamakhadi amaningi aphuzu.
Yize ukuhlaziya kuveza ukuthi lo mdlalo iwona ozocacisa ngesicoco seligi kodwa konke lokho uMosimane uyakuphikisa. “Lo mdlalo weChiefs neSundowns akuwona ozocacisa ngesicoco seligi. Noma kuthiwa imiphumela ithini, ozoba ngumpetha wakule sizini uzobonakala emva komdlalo wokugcina. Emdlalweni emithathu edlule baningi akade bethi iligi iya eNaturena kodwa ngoMsombuluko konke lokho kwajika, kuchaza ukuthi kusangenzeka noma yini noma kuthi iSundowns ihluliwe” kusho uMosimane. Uma iChiefs ingehluleka ukunqoba iligi kuyobe izenze yona njengoba ibinawo wonke amathuba okuyithatha. Emdlalweni neBidvest Wits yadlala ngamathuba yajike yazodlala ngokulingana nayo kanti ukube yawunqoba ngabe kukhulunywa okunye.
nguSabelo Maphumulo Aug 27, 2020